Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A October 2010 (5)
Q and A October 2010 (5)
1. ကိုယ်ဝန်မရအောင် အရေးပေါ် သောက်ရတဲ့ဆေးက
3. မျက်စိက အဝေးကိုဆိုရင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မမြင်ရတော့ဘူး
4. Adrenaline နဲ့ Hydrocortisone အကြောင်းကို ရှင်းပြပေးပါဦး။
A: ဆေး အမျိုးအစားအပေါ် မူတည်တယ်။ ဆက်ဆံအပြီး ၃-၅ ရက်အတွင်း သောက်ရတယ်။ လိုအပ်ရင် တိုက်ရိုက် အီးမေးလ် ရေးပါ။ Marvelon 28 (Desogestrel 0.15 mg and Ethinyl estradiol 0.03 mg) လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် ၅ ရက်အတွင်း၊ ၄ လုံး ချက်ချင်းသောက်ပါ။ ၁၂ နာရီခြာပြီး နောက်ထပ် ၄ လုံး ထပ်သောက်ပါ။
A: Adrenaline ဆိုတာ လူ့ကိုယ်ထဲက လိုရင် လိုသလို ထုတ်ပေးနေတဲ့ လူတွေ စသိခဲ့တဲ့ “ဟော်မုန်း” တခု ဖြစ်တယ်။ တိရစ္ဆာန်တွေမှာလဲ ရှိပါတယ်။ သူထွက်လာရင် နှလုံးခုန်နှုန်း မြန်လာတယ်။ ထိန့်လန့်စရာ၊ မထင်မှတ်တာ၊ အန္တရာယ်တခုခု ကျရောက်ရင် အလိုလို ထွက်လာတာမို့ ဆေးပညာ ဗဟုသုတ ရှိသူတွေက “လန့်လိုက်တာကွာ မင်းကြောင့် (အဒြီနလင်) ၂ စက်လောက် ထွက်သွားတယ်” လို့ ပြောတတ်ကြတယ်။ ဘိုလိုတော့ fight or flight လို့ ပြောတယ်။
“Hydrocortisone ဟိုက်ဒရိုကော်တီဇုံး” ဆိုတာ (စတီရွိုက်) ဆေးဖြစ်တယ်။ သိပ်အစွမ်းထက်ပြီး သိပ်သတိထား သုံးရတာမျိုး။ ခက်တာက ဆေးလက်မှတ် မပါဘဲ ဝယ်လို့ရတယ်။ အရေပြားမှာ ယားယံတာ၊ နှင်းခူနာ၊ အကောင် ကိုက်တာ၊ တခုခုနဲ့ မတည့်တာ၊ စအိုယားတာ၊ ခေါင်းယားတာ၊ စတာတွေအတွက် 0.5% or 1% Hydrocortisone ဆေးတွေ ဝယ်လို့ လွယ်တယ်။ တနေ့ ၁-၄ ကြိမ်သုံးရတယ်။